Tag: isdhexgal infographic | Martech Zone
Tag: farshaxan is-dhexgal ah
Moovly: Naqshadeynta Cajalado Fiidiyowyo ah, Xayeysiisyada Banner ama Infographics
Naqshadeeyahayagu wuxuu ahaa mid shaqo adag, dhawaanahan wuxuu soo saaray muuqaal fiidiyoow ah oo loogu talagalay Xaqiiqda Isdhexgalka. Marka laga reebo kakanaanta animation-ka, sameynta fiidiyowyada qaar waxay qaadataa saacado iyadoo la adeegsanayo aaladaha desktop-ka caadiga ah. Moovly (waqtigan xaadirka ah beta) wuxuu rajaynayaa inuu taas beddelo, isagoo siinaya barxad u oggolaanaysa qof walba inuu si fudud u abuuro fiidiyoowyo xayeysiis ah, xayeysiisyo xayeysiis ah, bandhigyo is-dhexgal ah iyo waxyaabo kale oo qasab ah. Moovly waa aalad fudud oo khadka tooska ah oo kuu oggolaanaysa inaad abuurto waxyaabo animation leh adigoon haysan
Waxaan ku jecel nahay Visual.ly raadinta iyo wadaagida faahfaahinta. DK New Media waa naqshadeeye shahaadeysan oo ku yaal Visual.ly, oo leh tan badan oo ah sawir-gacmeedyo waaweyn oo aan baarnay, u qaabeynay oo aan u dallacsiinnay macaamiisheenna. Sidoo kale infographics static, kooxda Visual.ly ayaa sii wadaya inay xoojiso astaantooda firfircoon sidoo kale… hubi faahfaahinta weyn ee Google Analytics ee ku soo jiidanaysa tirooyinkaaga toddobaadlaha ah qaab quruxsan. Xitaa waxaad kuheleysaa in lagugu soo diro emayl ahaan